काला जातिका युवकलाई घांटी थि'चेर मा''र्ने अमेरिकी प्रहरीकी श्रीमतीले डि’भोर्स दिइन् ! - Filmy News Portal Of Nepal
काला जातिका युवकलाई घांटी थि’चेर मा”र्ने अमेरिकी प्रहरीकी श्रीमतीले डि’भोर्स दिइन् !
अमेरिकी राज्य मिनेसोटामा एक निह’त्था अश्वेत अफ्रिकी अमेरिकी युवक जर्ज फ्लोयडको ह/त्यामा सं लग्न प्रहरी अधिकारी डेरेक चौभिनकी गर्भवती श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छे द गरेकी छिन् । डेली मेलका अनुसार ४५ वर्षे केली चौभिनले डेरेकसँगको आफ्नो १० वर्षको सम्बन्ध तो ड्न लागेको बताएकी छिन् ।
आफूहरुबीच सुधार गर्नै नमिल्ने विषयमा मनमु’टाव पैदा भएकोले सम्बन्ध विच्छे द गरेको केलीले बताएकी छिन् । केलीले आफूहरु मे २८ मा आधिकारिक रुपमा छु’ट्टिएको बताएकी छिन् । त्यसको तीन दिन अघि मात्रै डेरेकले जर्ज फ्लोयडको घाँटीमा ९ मिनेटसम्म घुँडाले थि चका थिए, जसका कारण जर्जको मृ त्यु भयो । यल इस्टेट एजेन्ट केलीले आफू हाल बेरोजगार भएको बताएकी छिन् ।
पूर्ववत् सम्बन्धबाट दुई सन्तानकी आमाले डेरेकबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग नचाहेको बताएकी छिन् । ‘प्रतिवादी आफैंले आफैंलाई सहयोग गर्न सक्षम छिन्,’ सम्बन्ध वि’च्छेदको कागजातमा लेखिएको छ । लाओसबाट बाल शर’णार्थीको रुपमा अमेरिका पुगेकी केलीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नसमेत अदालतमा निवेदन दिएकी छिन् ।
मिनेसोटा अमेरिकाको सुन्दरी प्रतियोगिताकी बिजेता मिनियापोलिसको हेनेपिन काउन्टी मेडिकल सेन्टरमा रेडियोलोजिस्टको रुपमा समेत कार्यरत थिइन् । यी दुईले सन् २०१० को जुन १२ तारिखमा मिनेसोटाको वासिङ्टन काउन्टीको अदालतमा विवाह गरेका थिए । उनले सोमबार त्यहि अस्पतालमा सम्बन्ध विच्छे दका लागि निवेदन दिएकी छिन् । – एजेन्सी